ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Mersin Metro ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုတင်ဒါ | RayHaber | raillynews
တင်ဒါအသိပေးချက် - Mersin Metro ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ယာဉ် ၀ ယ်ခြင်းတင်ဒါ
« တင်ဒါကြေငြာချက် - ဘရိတ်စမ်းသပ်မှုစနစ်နှင့် Bogie Chassis Static နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်စနစ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး »
MERSİN METROPOLITAN မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဦး စီးဌာန
အများပြည်သူဝယ်ယူမှုဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၊ အရပြည်သူ့ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ အရ LRT METRO LINE တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်စနစ်များထောက်ပံ့ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊
6 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကို align လုပ်ဖို့အားဖြင့်လက်ခံရရှိသော Pre-qualification သတ်မှတ်ချက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားသူတွေကိုထံမှထိရောက်မှုရလဒ် pre-အရည်အချင်းများအကဲဖြတ်လေလံဆွဲရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။
နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 714553
က) လိပ်စာ - PALMİYE MH ။ 1219 SK ကို။ ကွန်ပျူတာ APT ။ NO:933110 KİREMİTHANEYENİŞEHİR / MERSİN / TURKY
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3245333801 - 3242381640
ဂ) အီးမေးလ်လိပ်စာ ulasim@mersin.bel.tr
ç) အရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုနှင့်တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကြည့်ရှုနိုင်မည့်အင်တာနက်လိပ်စာ - https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
prequalification ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 2- ဘာသာရပ်
က) အရည်အသွေး, အမျိုးအစားနှင့်ပမာဏ၏:
၎င်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၃.၄ ကီလိုမီတာရှည်သောဘူတာ ၁၁ လုံးနှင့် LRT Metro လိုင်းတစ်ခုလုံး၏စုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုဖြစ်ပြီးမက်ထရိုမက်ထရစ်လိုင်း ၁၅ ခု (စုစုပေါင်းယာဉ် ၆၀)၊
ခ) နေရာ - MERSİN / MERKEZ
ဂ) အစအဦးအလုပ်လုပ်: အ 15 ကာလ၌စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ.
()) အလုပ်ချိန် - ၁၂၀၆၀ (အရက်နှစ်ထောင်ခြောက်ဆယ်) ရက်မှနုတ်ထွက်သည့် နေ့မှစ၍ ။
3- ၏ pre-အရည်အချင်းများအကဲဖြတ်
က) နေရာ - Mersin မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန Palmiye Mah.1219 sok No:9YenişehirMERSİN
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 18.03.2020 14: 00
yearzmir BB မီးရထားစနစ်မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူရေးတင်ဒါ ၈၅ ခုအတွက်ယခုနှစ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း…
Mersin Metro Prequalification တင်ဒါရက်ပေါင်း 20 အတွက်ရွှေ့ဆိုင်း
တဲလ်အဗစ်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် (NTA) မီးရထားလမ်း ၁၂၀ …
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gaziantep xnumx.etap ရထားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များနှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
တင်ဒါ၏ကြေငြာချက် - အမျိုးမျိုးသောбукဆွဲမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အသုံးပြုရန် ၂ Pen Peak Brake …
Kayseri-Niğde-Ulukışla-Mersin-Adana-Toprakkale အပိုင်း GSM-R နှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း…
Konya Metropolitan Municipality Tramway တင်ဒါခေါ်ယူမှုအတွင်းဝယ်ယူမည့်ကားအရေအတွက်
Izmir BB 85 မီးရထားစနစ်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုတင်ဒါအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်hazırlık
အိမ်ရှင်နှင့် Karşıyaka ဒီလိုင်းနှစ်ခုပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မယ့်လမ်းရထားတွေနှင့်ယာဉ်များတည်ဆောက်ခြင်း
တင်ဒါကြေငြာချက် - Sekidüzüတွင်ယာယီŞenyurt-Mardin Stations Geçiciအကြားတည်နေရာ
ယနေ့သမိုင်းတွင် - မေလ ၄ ရက် ၁၈၈၆ Mersin-Tarsus-Adana လိုင်း Mersin-Tarsus အပိုင်း…
Mersin မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, Mersin Metro မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူတင်ဒါ, Mersin Metro ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ
တရားမျှတရေး mAh ဘက်ထရီ။ Anatolia CAD ။ Megapole အလံမျှော်စင်, 41 / 81
Izmir, Izmir 35530 Türkiye + Google Maps ကို